Yese Yekutungamira Kuenda | Imba Yakavakirwa Franchise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»Yakazara Yekutungamira Ku Franchise
Yese Nongedzo ku Franchise Mukana
Wakanga uchiziva here kuti anopfuura 50% ye- £ 15.7bn mushambadzi anoshandisa achaenda padhijitari nepo online midhiya panguva 2018 achirova anodhinda, sinema, mabhazi, mabhodhi, TV neredhiyo zvakabatanidzwa? Ungave unoda kudimburwa kwemabhiriyoni ari kushandiswa kushambadzira kwepamhepo nedhijitari? Iwe unogona kuve nebhizinesi repamhepo repamhepo kubva kungoriita $ 8,000 + VAT. Kune akawanda mikana yebhizinesi Franchise kunze uko, asi kuve muridzi weFlorise ane mubairo-kuhwina Tungamira kuTangi kunoreva kuti une mukana wekukura bhizinesi rako nerutsigiro rwevanobva bhizinesi. Izvi zvinoreva kuti unogona kutarisisa nezvekutengesa pamwe nekuvandudza mari uye purofiti asi isu tichitora kushushikana kwacho uye tichikubatsira iwe nehurombo chiratidzo chikuva. Yese Nhungamiro kuSwindon yakaenda muhupenyu muna 2011 uye yakadzosera pamusoro pegumi nemakumi mapfumbamwe nemashanu emadhora mumwedzi yayo yekutanga 179,000, uye yakaita purofiti ye £ 9k kunyangwe kuisa mari yakawandisa mukuvhurwa kwemaiti mazhinji; Bhati, Bristol, Manchester uye Kuverenga. Nekuve nemasaiti mazhinji mumba uye tatova neFganised Chiverengero kuManchester, isu takaratidza bhizinesi rekuenzanisira rinoshanda mune chero guta kana guta muUK.
Nei uchifanira kuve Wakazara Gwara kuna Franchisee?
Proven muenzaniso (£ 179k kutendeuka uye 26k purofiti gore 1 - panguva kuderera!)
Inotengesa uye inoshandura musika
Kubvunzwa kukuru uye Kuderera Kwekudzivirira
Hapana stock kana vashandi
Mari inosara ine mari yakawandisa yekuwana
Kudzidziswa uye Kuenderera mberi rutsigiro
Vandudza bhizinesi kuti rienderane nezvido zvako uye mararamiro.
Ndiani anoita iyo Nhamba Yekutungamira yeFranchise sutu?
Vanhu vakatarisa kumisikidza bhizinesi ravo nekukurumidza nenjodzi shoma uye dura
Makanzuru emunharaunda, maBID kana maChambers of Commerce achitsvaga iyo-yese-inosanganisira nzvimbo yemuno webhusaiti iyo inogona kutariswa.
Chero ani zvake anoda kumisikidza bhizinesi ravo nekunakirwa uye nehunyanzvi mukutengesa, kushambadzira kwedhijitari uye kunyora
Vaya vanofarira uye vane ruzivo nezveguta / guta kana nharaunda yavanogara
Iyo Franchise Package
Iyo Yakazara Yekutungamira ku Ltd franchise package inosanganisira inoenderera mberi kushambadzira kwevatengi uye kushambadzira uye bhizinesi rekutsigira rutsigiro. Iyo franchise inotanga kubva ku8,000 + VAT kusvika pa20,000 + VAT zvichienderana nesaizi yenzvimbo. Iyi imwechete yekubhadhara mari inomiririra iyo-yese inosangana pasuru iyo inounza pamwechete zvese zvakakosha zvinyorwa kuti ubudirire kutanga uye kuvaka bhizinesi. Isu tinotenda kuti izvi zvinopa mukana webhizimusi rekutendeuka iro rinoshongedza franchisees kubva pakutanga, ichipa hwaro hwakasimba hwekukura kwebhizinesi rakabudirira.
Iyo Franchise Package Inosanganisira:
Yakasiyana uye yakadzivirirwa nzvimbo yekushandisa, kumhanya nekutengesa bhizinesi rako.
Iyo yakazara nevanhu yakazara uye inosvika ikozvino webhusaiti yakagadzirira iwe kuti utange kuwedzera vashambadziri
Yakazara tekinoroji uye bhizinesi kudzidziswa kosi, kusanganisira:
Zvekufambisa Management System Kudzidzisa
Kushambadzira uye PR Dzidziso (inosanganisira SEO, Yemagariro Media uye PR)
Photoshop / Kudzidzisa Kugadzira
Kuenderera mberi kwekuwedzera ad-hoc kudzidzisa kuti ive nehuwandu hwemashumiro iwe aunogona kupa mubhizinesi rako seyenhabvu media management nekudzidziswa
Bhizinesi Kupa mazano kubva kuMuvambi neManaging Director Liz Ledger
Kuwanikwa uye kushandiswa kweNhamba Yekutungamira kune malayisense software; CMS, Email Kushambadzira Software
Zvese zvaunoda kutanga Nhamba Yekutungamira kune franchise inosanganisira; webhusaiti uye CMS, CRM, Email Kushambadzira software, yemagariro media uye kushambadzira rutsigiro
Mikana yekuvandudza yako saiti uye bhizinesi ne 'bolt-ons' - Nhau, Nhabvu, Classifieds uye Tungamira Generation
Iyo License Fei inotangira pa5% yezvauri kuburitsa. Izvi zvakakosha sezvo zvichiratidzira zvido zvefrancisee uye franchisor, kufambisa yakakura uye kuenderera mberi kudyara mukukudziridza kweneti uye kusimudzira kunoramba kuchiripo kwekutsigira.
Chii chinosanganisirwa muLayisensi Fei?
Yako franchise inokupa iwe kutengesa pasi peiyo Nhamba Yekutungamira zita uye kushandisa vashandisi vedu-vepamba vashandi, saiti, software, zvemukati maneti uye IT software kuti uzvivake rako rakabudirira bhizinesi raunotarisira uye kumhanya. Iwe uchave nekuwana kune zvese zvikamu zvebhizinesi, kusanganisira zvese zvekushambadzira zvinhu, webhusaiti, tsambanhau, tarisiro system, CRM, zvemagariro vezvenhau uye kuenderera mberi kutsigirwa uye kudzidziswa - zvese zvinosanganisirwa. Zvakare kutengesa kumabhizinesi ari kwaunogara, iwe zvakare une mukana wekuita mari yakawanda kuburikidza nekutengesa-tengesa mapakeji pane webhusaiti yeboka.
Kana iwe uchizoda kuziva zvakawanda pamusoro peiyo Nhamba Yekutungamira kuFranchise Mukana, ndapota bvunza pazasi uye isu tichave tichitarisana.